Kulula ukukhula imifino yonke unyaka kwifestile. Ekhitshini elungileyo indawo evelayo yintsika yefestile kunye nekamelo lakho, lenza umsebenzi walo wokuhlobisa kwaye inokuzisa ezininzi iinzuzo. Indlela yokukhulisa imifuno kwifestile iya kufumana kwaye iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphindwe kwakhona.
Ngaphambi kokuba ukhule i-greenery ekhitshini, unokujamelana nobunzima bezobugcisa. Zonke izityalo eziza kukhula ziya kufuna ukuhamba rhoqo komoya otsha okanye ukungena umoya, ngokukhanya okukhulu. Kwaye konke oku kufunyenwe yizityalo, kungcono kakhulu kukhule kwaye kukhule okuluhlaza.
Izityalo zifuna amanzi aneleyo. Xa umhlaba, udibaniswe nesihlabathi, uqala ukuma, kufuneka uphuze. Ukuze kungabikho ukutshabalalisa izityalo, akufuneki ukuba kuninzi amanzi, ungavuli iifestile ukuba isimo sezulu sibanda ngaphandle.
Xa imifino ewindowenu iqhakaza, kufuneka inqunywe. Oku kusebenza kwi-basil kunye ne-anyanisi eluhlaza. Njalo unqumle ukuhlutha kunye nokuqhathaniswa kwebala kunye namacembe. Ngamanye amaxesha kwiivenkile ezithengiswayo iimbiza kunye nemifino zihlanganiswe kwifilimu ebonakalayo. Ekhaya, kufuneka isuswe ngokucophelela ukuze ubuncipheko obuninzi bezityalo abuthandi buqokelele.
Izimbiza kunye nemifuno .
Iipotyi mazifakwe kwikhabhinethi, iithalafu, iifestile, kwinqanaba elangeni lekhitshi. Bangakwazi ukuxhoma kwizibongo ezizodwa. Ezinye izityalo zikunceda ukulahla iphunga legobolondo, ukusuka ekhishini elivumbayo. Le mifuno ivuselela ngokufanelekileyo umoya. Ukuba uhlamba ezintendeni ze-rosemary, ikhefu liya kuzaliswa ngephunga le-freshness and purity.
Udidi oluhle lwezityalo eziluhlaza .
Xa uyihlobisa ikhitshi ngokuluhlaza, izityalo ezifanelekileyo, uya kubona ukuba ikhitshi iya kutshintshwa. Kusuka kule mihlaba ungenza iziqulatho ezintle ezingazilibaleki. Baya kwandisa ubungqina kuwe, benovuyo, bajabule baze bavuyise iliso. Zonke ezi zityalo ziya kuba yinzuzo enkulu kwintsapho, kwaye kuya kuba mnandi ukuwadiliza ekhaya kunokuthenga ezo zinikwe zona esitolo. Leli gumbi logcino lwevithamini, eziyimfuneko kumzimba womntu. Ngokungabikho kwemveliso esemgangathweni kunye nokungabikho komoya omtsha, ezi vithamini ziyimfuneko kuwo wonke umntu.
Iingcambu zingakhula kwizimbiza zobumba, kwizimbiza zegriam kunye neglasi, kunye nequla elincomekayo. Unokuthatha njengembiza ukuze ukhule ngokutsha-iifomu ezingadingekile zokubhaka, izitya zakudala. Ukuba uzilungelelanisa ukusuka kwinani elifanayo leembiza uze ufake amaqela amancinci, kuya kuvela kakuhle.
Kakade, kulungile ehlobo xa kukho iivithamini eziqinileyo. Ehlotyeni ilanga kunye nokushisa, ukutshala ingca, iintyatyambo, imifuno, iziqhamo, kodwa yonke into iphela. Ihlobo lithatha indawo yekwindla, kwaye ubusika buza. Umzimba wethu udinga iivithamini, kodwa kukho iqhwa ngaphandle kwewindow, kwaye kwifestile, kakuhle, ukuba kukho ibhokhwe ene-lemon esele iphile.
Indlela yokukhulisa imifuno?
Unokujamelana naluphi na uxinzelelo, kwaye ekuqaleni siya kudla i-lemon eyomileyo, kwaye siya kufaka iimbiza zeentyatyambo ngaphantsi komhlaba ukuze sitshale intsimi encinane. Oku kunjalo ngokwenene, kuba le nto yokuncedisa kunye nenhle iya kukuzisa impilo, iivithamini kunye nesimo esihle. Kuyo nayiphi na ingadi isaphetha sithathwa njengento ephambili, abantu bathi malunga noononisi bancedisa kwizifo ezisixhenxe.
I-anyanisi eluhlaza inemihlaba ye-phytoncide, isityebi kumafutha abalulekileyo, ushukela, iivithamini. Kwamaqabunga e-anyanisi, kukho amaxesha amaninzi ngaphezulu kwe-vitamin C kunokuba iqulethwe yibhokhwe ngokwayo. Ngaliphi na ixesha lonyaka, kunokwenzeka ukuba ukhule anyanisi kwindawo efudumeleyo, eyomileyo. Njengempahla yokufika, ama-bulbs amancinci anesisindo sama-3 centimeters afanelekile. Ngaphambi kokutyala, i-anyanisi inqunywe kwihlombe ngecentimitha enye kunye nesigxina kwaye ishiye iintsuku ezi-4 ukuba zome, oku kuya kubangela ukufikelela kwe-oksijeni.
Emva koko i-anyanisi iya kutsalwa kwizimbiza ezilungiselelwe umhlaba. Kufuneka kube malunga nolu hlobo lomhlaba - siya kuthatha inxalenye enye yomhlaba we-sod, enye inxalenye yesihlabathi, iindawo ezimbini ze-humus. I-anyanisi izotyaliswa kumgama wama-10 cm, ukuze i-bulb ixubane nje kuphela nomhlaba. Siza kuthulula amanzi atshisayo, kwaye sibeke i-anyanisi kwindawo emnyama, kwaye sele sele ivela intsiba eluhlaza, sisusa iimbiza kunye nee-anyanisi kwiifestile. Intsiba iyancipha kancane kancane, njengoko ikhula, iyakhula kwakhona kwiibhulabhu ezinkulu, kodwa ungakulibala ukuyikhupha uze uphele amanzi.
Umyezo omncinci kwifestile kufuneka udliwe ngamaminerali kunye nezichumiso eziphilayo. Ukuba uphinde ukhule imifuno, umhlaba ukhululiwe kwaye utsalwa ngemifuno. Kwaye yonke ibusika uya kuba ne-anyanisi eluhlaza kwiifestile, i-anyanisi eluhlaza, i-parsley, i-dill, i-basil, i-radish njalonjalo, yonke into enomnqweno wakho. Kwiibhokisi ungakhula imifuno kunye nemifuno unyaka wonke, ukuba unamanzi kumanzi amancinci angancinci, okanye nge-strainer.
Ekugqibeleni, unokukhula uhlaza kunye nemifuno efestile. Sikunqwenela ukuvuna okulungileyo, kwaye sinethemba lokuba iingcebiso zethu ziyakunceda ukuba uhlale unemifuno emitsha, utamatisi kunye namakhukhamba etafileni yakho.
Ziziphi iindawo ezifanelekileyo zokuqala ukutshala indlu?
Izityalo ezingaphakathi: pachypodium
Ikhalenda yeLunar yomyezo wegadi waseJulayi ngo-2015
Isityalo seNdlu yomcwangcisi
Ukuqoqa izityalo zangaphakathi
I-Puree isobho kunye nolwimi lwe-porcine kunye ne-beetroot
Imfihlakalo yegama lomntu uVladislav
I-Corrector yomncedisi-ubuso kwimiba engxamisekileyo
Imeteorism kunye nokunyangwa kwamanyathelo omntu
Inkambo yokumvelo: Iimfashiso ze-High Fashion Week-2016
Kuchaneka njani ukujonga emva kwebhasi?
I sandwich ezitshisa nge mozzarella
Iindlela ezihlanu eziqinisekisiweyo zokujamelana noxinzelelo
Abazali basabela njani ngokuchanekileyo kwiziphakamiso zootitshala?
Umveleli we-TV uSvetlana Volnova
I-Crochet iintyatyambo: umzobo kunye nenkcazo kwizifundo
Isitha esiyimfihlo: TOP-3 iimveliso eziqhelekileyo eziqhelekileyo